Ny toetra tokony hananana
"Mitandrema hianareo, fandrao mahavery izay namonoanay tena, fa mba handraisanareo valim-pitia tanteraka. Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy, dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka." - 2 Jao. 1:8,9.
Tsy ho ela dia hiseho ny ezaka tsirairay azo tanterahina, mba hanaovana tsinontsinona sy hanazimbazimbana ny fahamarinan'ireo teny filazana ny amin'ny Fanahin'Andriamanitra. Tsy maintsy manana fahavononana hitondra ny hafatra mazava sy mahitsy izay natolotr' Andriamanitra hatramin'ny taona 1846 isika.
Misy amin'ireo tafaray amintsika ao amin'ny finoana no hikatsaka foto-pampianarana vaovao, hafahafa, zavatra tsy miala amin'ny mahazatra sy manaitra ny fihetseham-po mba hoentina eo anatrehan'ny olona. Hanangona ny hevi-diso rehetra izay azon'ny saina foronina izy ireo, ka haneho izany ho toy ny avy amin-dRamatoa White, mba hahafahan'izy ireo mandambolambo fanahy maro (...)
Ireo izay mandray ny fahazavana avy amin'ny Tompo ho toy ny zavatra tsotra mahazatra, dia tsy mba hahita tombontsoa avy amin'ny toromarika nomena.
Misy ireo handika vilana ny hafatra avy amin'Andriamanitra, ka hampifanaraka izany amin'ny fahajambany ara-panahy.
Misy kosa ny hafa izay hampilefitra ny finoany ka handà ny fahamarinana fonosin'ny hafatra, ka hanondro izany ho toy ny lainga.
Ny sasany indray hanasohaso ny hafatra, ka hanohitra ny fahazavana izay efa natolotr'Andriamanitra an-taonany maro, ka ireo izay osa am-pinoana dia ho voatarika hivily.
Kanefa misy hafa handray fanampiana lehibe avy amin'ireo hafatra ireo. Na dia tsy mivantana manokana ho azy ireo aza ny hafatra, dia ho voahitsy sy ho voatarika izy ireo handroaka ny faharatsiana voatondro manokana (...) Hitoetra ao amin'ny fananarana ny fanahin'nv Tompo, ka dia ho voafafa avokoa ny fisalasalana nisy tao amin'ny sain'ny maro. Ireo teny filazana fotsiny ihany dia ampy ho fanalahidy hanazava ny hafatra nampitaina, satria ny Soratra Masina ihany no manazava ny Soratra Masina. Maro no hamaky amim-pahavitrihana ny hafatra izay manitsy ny fahadisoana, mba hianaran'izy ireo izay azony atao mba hahazoany famonjena (...) Ireo hafatra ireo dia tokony hanana ny toerany ao am-pon'ny maro hisian'ny fiovana.